Ampitomboy ny fitantanana ny fanananao amin'ny endrika vaovao Zeevou ho avy
Ny indostrian'ny fanofana maharitra dia miova amin'ny hafainganam-pandeha haingana - saika isan'andro. Misy fepetra vaovao tsy tapaka avy amin'ny mpampiantrano izay miatrika fanamby vaovao izay mila vahaolana vaovao.
Ny ankamaroan'ny mpamatsy rindrambaiko dia tsy miraharaha tsara ny fananana lehibe ananany - ny mpanjifany. Mandefa vokatra indray mandeha matetika foana izy ireo ary manantena fa hahatratra ny filan'ny mpanjifa izany. Ny hevitra rehetra avy amin'ny mpanjifa dia matetika no jerena ho fanodinana ary atsofoka ao ambanin'ny karipetra. Izany dia mitarika fahatsapana fahasosorana manodidina ny fihenan'ny fahazoan'ny PMSes sy Channel Managers sasany momba ny endri-javatra nasehony, ary mamela ireo tompon-trano hahatsapa fa tsy afaka mampandroso ny orinasany araka ny noeritreretin'izy ireo.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou's New Features?
Ao amin'ny Zeevou, dia raisinay ny mpanjifanay saosy miafina amin'ny fahombiazantsika, ary mino izahay fa tsy hahomby raha tsy amin'ny fanampiana ny Mpiara-miasa amintsika hahatratra ny azy ireo. Ity toe-tsaina ity no manohana ny fifandraisantsika rehetra amin'ireo Mpiaro antsika, ny fiteny ampiasainay, ary ny serivisy omenay.
Tsapanay fa, na lehibe toy inona aza ny vokatray, dia tsy misy dikany izany raha tsy misy serivisy lehibe mitovy. Ary ny ampahany amin'ny serivisy dia ny fampahatsiahivana ireo mpiaro antsika fa re ny feon'izy ireo, ary tena afaka mahatsapa ny fomba fiezahantsika hatrany hamaha ny teboka fanaintainany.
Izahay dia mitazona Forum ho an'ny mpiara-miasa matetika, izay manangona fanamarihana ary manandrana mampahafantatra ny laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana. Namolavola endri-javatra iray ao anatin'ny Zeevou ihany koa izahay, Raise a Hand, izay ankoatry ny fampiakarana tapakila, dia mamela ihany koa ireo mpampiantrano hanome soso-kevitra momba ny fiasa vaovao. Avy eo ny Tomponay vokatra dia mandray azy ireo ary, miaraka amin'ny ekipa Agile Scrum Teams, dia tonga niaraka taminay izahay Tondrozotra. Ny Roadmap anay dia manondro ireo laharam-pahamehana izay eo am-pandinihana sy izay kasainay hiasa mandritra ny fotoana maharitra sy maharitra.
Raha te-hanome ny hevitrao ianao amin'ny fiasa vaovao tianao ho hita ao amin'ny Zeevou ato ho ato, dia avy eo Hiditra Mpikambana anio ary ataovy re ny feonao!